Taageerayaasha Axial Iyo Agabka
Habka buufin ee marawaxada ceeryaamada biyaha
Awoodda uumiga ee biyaha marawaxada ceeryaamo buufin ayaa si weyn u kordhay. Biyuhu waxay nuugaan kulaylka inta lagu jiro habka uumiga waxayna yareeyaan heerkulka. Isla mar ahaantaana, waxay kordhin kartaa qoyaanka qaraabada ah ee hawada, hoos u dhigista boodhka iyo nadiifinta hawada. Mabda'a taageere ceeryaamo buufin ah: A: Ce...
Waa maxay sababta tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib uga no no noqatey loo xalliyey xawaaraha gaabiska ee marawaxada dabaqa?
Xilliga xagaaga kulul, dhammaan noocyada qalabka korontada ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo. Marka lagu daro qaboojiyeyaasha caadiga ah ee la isticmaalo, taageerayaashu sidoo kale waa doorasho wanaagsan. Waxqabadka kharashku aad buu u sarreeyaa. In kasta oo raaxadu noqon karto mid dhexdhexaad ah, way ku habboon tahay in la isticmaalo oo raqiis ah, aad bayna ugu habboon tahay ...
Mabda'a shaqada ee afuufiyaha cylindrical
Mabda'a shaqada ee afuufiyaha cylindrical Mabda'a shaqada ee afuufiyaha centrifugal wuxuu la mid yahay kan hawo-mareenka centrifugal, laakiin habka isku-buufinta hawada waxaa badanaa lagu fuliyaa dhowr impellers shaqeeya (ama dhowr heerar) oo hoos yimaada ficilka c.
Qaabka utility wuxuu la xidhiidhaa humidifier centrifugal ah oo gacanta lagu riixay
Tignoolajiyada humidifier-ka sentifugal, oo ay ku jiraan qolof sare, oo lagu sifeeyay qolofta dibadda ee Dejinta gudaha ayaa ka baxay ceeryaamo, iyo saxan ceeryaamo ah oo lagu dhejiyay meel ka baxsan chute, oo lagu sifeeyay baarka taageerada ee hoose ee xidhiidhka daasadaha dibadda, oo dhigay hoose ...
Ma doonaysaa in aad ogaato sida uu u shaqeeyo humidifiyaha centrifugal?
Mabda'a humidifier centrifugal waa in saxan wareeg ah centrifugal uu ku wareego xawaare sare iyadoo la raacayo ficilka matoorka, biyaha si xoog leh ayaa loogu tuuray saxanka atomizing, iyo biyaha tuubada waxaa lagu atomized 5-10 microns oo ah walxaha ultrafine iyo ka dibna dibadda loo saaray. Ka dib blo...
Kuleyliyaha Gaaska ee Barafka ayaa ka dhigaya nolosha mid aad u raaxo badan
Kuleyliyaha barafka gaasku wuxuu noqon karaa mid aad u fiican gurigaaga iyo barxadaada wuxuuna ku siin karaa kulayl wakhti kasta oo sanadka ah. Kuleyliyaha gaaska ayaa si gaar ah faa'iido u leh xilliga jiilaalka, sababtoo ah waxay bixisaa biyo kulul iyo diirimaad on barxadda, halkaas oo inta badan qabow yahay dibadda. Kuwaas...
Sida Looga Fogaado Cadaadiska Kulaylka
by admin 20-05-20
Kuleyliyeyaasha Korontada waxay keenaysaa nafis kharashka kuleyliyaha dibadda ah
Qiimaha gaaska. Laba kelmadood oo cabsi gelin kara xataa kuwa ugu caafimaadka badan ee jeebka, iyo siyaabo aynaan hore u malayn. Kuleylinta dibadda ee la deggan yahay waa mid ka mid ah tusaale ahaan. Halka noocyada kala duwan ee kuleyliyeyaasha bannaanka ee gaaska oo ay ku jiraan kuleyliyaha Infrared iyo Propane Heater ee aagga bannaanka...
WAA MAXAY FARQA U DHEXEEYA MAAREEERAHA CAYRAANKA IYO qaboojiyaha hawada?
Marka la eego farqiga ugu weyn ee u dhexeeya marawaxad ceeryaamo ah iyo qaboojiyaha, taas oo ah, marawaxad ceeryaamo ahi waxay isticmaashaa tignoolajiyada centrifugal halkii ay ka isticmaali lahayd tignoolajiyada culayska sareeyo, si aad si fudud ugu gudbi karto sidaad doonto iyadoo qaboojiyaha aanu awoodin. Laakiin gaar ahaan hadalka, taageeraha misting waxaa u dheer inuu ku raaxaysto ...
Cinwaanka:No. 388 Linruo Road, Songmen Town, Wenling City, Gobolka Zhejiang